Nepal Deep | प्रचण्ड-नेपाल पक्षको गोप्य भेलाको निस्कर्ष: ओलीले भनेको नमाने पार्टी फुटाउन दिने
नेपालदीपलाई प्राप्त सूचना अनुसार सोमबार ललितपुर सुनाकोठी स्थित डा. निरज गोबिन्द श्रेष्ठको निवासमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ,नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेकपा का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्यहरु डा. भिम बहादुर रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल लगायतका नेताहरु दिउसो साढे ३ बजे देखि रणनीति बुन्न लागि परिरहेका छन्।
दिउसोको साढे ३ बजेदेखि सुरु भएको बैठक समाचार लेख्दाको समय बेलुकाको साढे ६ बजे सम्म पनि चलिरहेको नै छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापतिसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गृह मन्त्रालय सहित महत्वपुर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन आग्रह गरेको घटना जानाजान ओली पक्षले ‘लिक’ गरेपछि त्यसलाई ‘काउन्टर’ कसरी गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ।
पश्चिमका जिल्लाहरुको भ्रमण गरेर आएका सुरेन्द्र पाण्डेले जिल्लाहरुमा आफ्नो पक्षको गुटगत उपस्थिति र ओली पक्षको क्षमता बारे ब्रिफिंग गरेका थिए।
त्यस्तै, लगभग उपस्थित सबैले प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमनको विकल्प नरहेको बताएका थिए। ओली सरकारको अनैतिक कामहरुको भारी बोक्नु भन्दा ओलीलाई पार्टी फुटाउन दिने कुरामा सबैको एकमत रहेको थियो। तर सत्ता जोगाउन ओलीले हरेक हत्कण्डा अपनाउने पार्टी एकता, देशको ख्याल पनि नगर्ने भएकोले कसरी ‘सेफ-ल्याण्डिङ्ग’ गराउने भन्ने छलफल भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ।
ओलीको रणनीति: प्रचण्डलाई गलाउन देउवासँग सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव
प्रतिनिधिसभा विगठन गर्ने आट ओलीमा छैन: भीम रावल